Ity OPEN Space ity dia manome fahafaham-po ny hevitrao rehetra. Feno "toerana miafina" - Faucets ao an-dakozia tsara indrindra 2020 | Faucets dakozia tsara indrindra | Faucet ao an-dakozia
Home / Interior design / Ity OPEN Space ity dia manome fahafaham-po ny hevitrao rehetra. Feno "habaka miafina"
2021 / 08 / 08 FisokajianaInterior design 3510 0
Manao ahoana ny fananana trano feno "taova"? Aza mikipy, ny trano asehonay anao anio dia tena hafa mihitsy! Ny trano dia miorina eo afovoan'i Shanghai, eo akaikin'ny Wukang Building malaza. Tsy manam-paharoa ny toerana misy azy, ary ny endriny anatiny dia miavaka kokoa.
Ity no tranon'i Cat, ny vadiny ary saka roa. Ny tompony dia samy mpilalao gamer veteran ary efa nitety firenena 40 mahery raha toa kosa ka miezaka “mamindra biriky” ny namany. Rehefa fanahy roa mifanentana no mifandona sy mifamatotra dia lasa faniriana iraisana ny ho lasa dink, hanana saka ary hilalao miaraka erak'izao tontolo izao. Mikasika ny trano fonenany vaovao, izy ireo koa dia "tsy voahitsakitsaka": tadiavin'izy ireo tsy ho voafehy sy malalaka kokoa izany, ho afaka amin'ny fanandevozana ary ho toerana honenana.
Novidina ilay trano folo taona lasa izay, ary natolotra tamin'ny famaranana rehefa nanomboka izy ireo. Satria mandeha miaraka amin'ny vadiko foana aho, dia tsy mandany fotoana be any an-trano, noho izany dia tsy manana takiana ambony amin'ny tranoko aho. Tamin'ny valanaretina 2020 vao tonga ny fahatongavan'izy ireo tampoka ny fianan'izy ireo.
Ny habaka tany am-boalohany dia firafitra misy efitrano roa sy iray ary ny toerana voalohany dia somary mahazatra ary lavitra ny trano mahaliana irin'ireo tompon-trano. Rehefa avy nahalala ny fahazaran-dry zareo izahay dia nanokatra tamim-pahasahiana ny habaka ary avy eo nampiasa ny famolavolana mekanika mba hamoronana lalimoara mihetsika sy sofa azo nakarina, nahatonga ny trano ho misokatra, toerana mifampitohy, gorodona foana ary taova miafina ao amin'ny valindrihana. Mahaliana sy mahafinaritra ity!
Mamaky ny fomban-drazana, ny rivotra iainana bebe kokoa
Ny rindrina teo anelanelan'ny efitrano fidirana sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia nesorina mba hamoronana kabinetra mihetsika telo amin'ny alàlan'ny famolavolana mekanika. Manana fahaiza-manao lehibe izy io ary tsy mila toerana malalaka, ka nantsoina hoe “Lapan'ny findain'i Cat” izy io.
Rehefa mikatona ny kabinetra dia ampahany amin'ny habaka fotsiny no alaina ka mangarahara sy mamirapiratra kokoa ny fidirana ary mahazo aina kokoa ny mandeha. Sokafy ny kabinetra, izay toy ny efitrano fisavana kely, afaka mitahiry kiraro, akanjo isan-karazany ianao. Satria mora be ny manokatra sy manidy, ka ny entana rehetra ampiasaina matetika dia azo tehirizina ao, ka tsy mila miahiahy momba ny trano ao anaty korontana intsony ianao.
Ny lakozia, ny efitrano fidirana ary ny gorodon'ny fandroana dia taila volondavenona. Ny faritra hafa dia gorodona hazo miloko maivana, namboarina tamim-pandehanana tamina filanjana manify tena manify, izay mahatonga ny maso ho tsotra kokoa.
Ny fampisarahana ny volondavenona sy fotsy eo amin'ny rindrina dia midika fa avadika ny habaka ary tsy hoe manana ambaratongam-pahitana fotsiny, fa tena voakarakara tsara ihany koa. Ny lalan'ny kabinetra dia alevina mialoha amin'ny valindrihana sy ny gorodona mialoha. Tsipika manify ihany no hita aorian'ny fahavitanana, ary ny habaka ankapobeny dia manana faharanitan-tsaina sy kalitao bebe kokoa.
Fantastic, feno mekanika, mahaliana ary mora ampiasaina
Tamin'ny famoronana an'ity trano ity dia tsy nifikitra tamin'ny fombany izahay. Fa kosa, namela toerana fotsy ampy mifototra amin'ny fampiharana izahay ary namela ny soritry ny fiainana ho haingo tsara indrindra.
Rehefa nosokafana ny efitrano misy tanjona maro dia lasa malalaka kokoa ny trano. Ny fanampiana fitaratra lehibe dia tsy manome fahafaham-po ny filan'ny tompon-trano amin'ny fivezivezena fotsiny, fa manitatra ny habaka amin'ny alàlan'ny famerenam-bidy, ka mahatonga ny efitrano malalaka sy mamirapiratra kokoa.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsy misy haingon-trano tsy ilaina. Kabinetra sy seza vitsivitsy dia mamela toerana malalaka hanaovana hetsika malalaka. Ny gorodona hazo miloko maivana dia manampy fihenan-jiro, ary miaraka amin'ny ambainy Shangri-La, ny rivotra dia manana atmosfera malefaka sy mamiratra.
Ny kabinetra dia mivelatra amin'ny efitrano fisakafoana mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary ny latabatra fisakafoana dia apetraka eo akaikin'ny kabinetra. Ny latabatra fisakafoana dia manana rafitra miafina ahafahan'ny fianakaviana misakafo sy misotro rehefa ampidinina ny latabatra. Rehefa mikatona ny latabatra dia mivadika varavarana kabinetra izy io, mamela toerana malalaka. Tsy te hanana bisikileta any an-trano ianao!
Barika vy vita amin'ny indostrialy ao anaty fitehirizana ondana maro. Raha avoakanao rehefa misy olona mitsidika anao dia azonao atao ny mampiasa ny ascenseur ho toy ny tatami mat, izay mety sy azo ampiharina. Eo an-tampon'ny barika dia zavamaniry maitso mavitrika, mba hahafahanao mampirehitra jiro amin'ny alina ary miala sasatra amin'ny ati-dohanao amin'ny mozika, izay hanampy anao hanala ny havizanan'ny andro.
Ny tompony dia tia manangona sary hosodoko rehefa mandeha izy. Ny sary hosodoko ao an-trano dia mila ovaina indraindray. Nanamboatra tariby vy teo am-baravarankely izahay mba hahafahan'ireo sary hoso-doko hiova irery. Ny trano dia manome fahatsapana fanavaozana hatrany ary tsy sasatra miaina mandritra ny fotoana maharitra.
Ny firafitra misokatra dia mampifamatotra ireo toerana rehetra. Ny fitaratra lehibe iray dia manitatra ny habaka ary manome fahafaham-po ny filan'ny fivezivezena.
Satria tsy nesorina ny rindrina nitondra entana teo anelanelan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano misy tanjona marobe, ary noho ny filan'ny sofa dia nampiasainay ho toy ny andry ilay rindrina mitondra entana. Nametraka lalamby mihetsiketsika izahay mba hanaovana takelaka fampakarana hananganana "efitrano fandraisam-bahiny manainga". Rehefa tonga ao an-trano ny vahiny dia azo ampidinina mba hatao bar. Izy io koa dia azo atsangana amin'ny rivotra midina toy ny fatoriana amin'ny sofa. Rehefa tsy mila izany ianao dia azo atsangana ambony, ary afaka mandalo eto ambany ny olona nefa tsy misy sakantsakana.
Satria tian'ny tompony ny fanatanjahan-tena dia nametraka "tohatra" amin'ny rivotra izahay. Mba hialana amin'ny vokam-pahitana tampoka dia nisy ny fampifanarahana ny zana-tohatra natsangana manokana ary miaraka amin'ny jiro eo an-toerana mba hahatonga ity faritra ity ho madio sy milamina. Matetika i Cat sy ny vadiny dia afaka mandray ny tohatra hanaovana fanatanjahan-tena. Tena afa-po izy ireo amin'ity ampahan-drafitra ity, satria tsy misy velarana velarana velively.
Ny rindrina iray dia miasa tanteraka, ary ny fandroana ankavia kosa atosika mankany anatiny hametraka kabinetra. Ny atitany dia nasiana takelaka misy lavaka. Ny karazana fitaovana rehetra ho an'ny fahasalaman'ny tompon-trano dia azo ahantona amin'ny sokajy samihafa.
Amin'ny ilany ankavanana, misy lalimoara ho an'ny efitrano fandriana. Mety hafindra amin'ny alàlan'ny làlana ihany koa izy io.
Ny trano fidiovana eo afovoany dia varavarana misosa tsy hita. Tsy tampoka tampoka akory ny varavarana avo sy ny loko fanamiana. Misokatra ny varavarana ary mikatona hanafina ny efitra fandroana sy ny fitoeram-bokatra, hahatonga azy io ho mitovy amin'ny fahitana.
Tsipika mihetsiketsika sy fiainana mahaliana
Ny varavaram-baravarana ambony dia tsotra sy atmosfera. Ny kabinetra lehibe amin'ny ilany ankavanana dia mitambatra amin'ny loko anatiny. Izany dia manalefaka ny fahatsapana ny fisian'ny ary mahatonga ny maso hiray kokoa sy vaovao. Azo ovaina ihany koa! Afindra ny efi-tranonao ary lasa efitrano fanamarinana miendrika roa izy io. Hidio ny kabinetra, ary ny habakabaka vaovao dia tsy hipoka toerana.
Ny efitrano fatoriana dia fiovan'ny mahazatra, miaraka amina fandriana hazo matevina maizina. Ny latabatra eo am-pandriana sy ny farafara dia mifamatotra ho iray, ka mahery ny fitehirizana ary koa mamorona fahatsapana fonosana, mba hahafahan'ny olona matory mora foana. Ny efitrano fatoriana dia tsy misy haingon-trano tsy ilaina, tsotra, mamelombelona ary manasitrana.
Ny efitrano fatoriana lehibe dia misy varavarankely lehibe. Rehefa tsara ny andro, dia milentika kamo ny masoandro. Rindramba miakatra saka no apetraka eo akaikin'ny fandriana. Matetika ny saka no milentika masoandro eto milamina, kamo ary milay.
Ny efitra fatoriany dia manana ambainy andro aman'alina, ary lamba misarona izy ireo. Mamelombelona sy mitondra rivo-piainana kokoa noho ny ambain-damba mahazatra io. Malemy kokoa sy tsara kokoa ihany koa ny jiro mihosin-trano. Ny tehina mihantona akrilika mangarahara dia apetraka eo amin'ny sisin'ny varavarankely, mba hahafahanao manantona ny pajama anao amin'izay tianao! Ataovy madio sy milamina foana ny tranonao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, ary milamina kokoa izy io.
Sokafy ny toerana ary mandehana malalaka
Efa nahita trano fandroana tsy misy varavarana ve ianao? Ity "malalaka efatra misokatra misokatra" ity amin'ny toerana malalaka rehetra, fa nahantona ny ambainy. Izy io dia misy teny efatra lehibe voasoratra eo aminy kapoka mafy: tsy misy varavarana! Nanazava izany i Cat satria fianakaviana dink izy ireo. Olona roa miaina fotsiny, ny fomba mahasambatra azy ireo amin'ny fomba ahatongavana.
Raha heverina fa kely dia kely ny trano fandroana, ampiarahina amin'ireo vitsy mponina maharitra, dia tsy misy ny famolavolana koveta lehibe, fa ny fanasana vava kely fotsiny. Izy io dia mifangaro amin'ny takelaka vy mainty ary miraikitra amin'ny rindrina. Miaraka amin'ny faucet napetraka amin'ny rindrina sy ny fantsom-panafahana amin'ny rindrina, mamelombelona kokoa izy io.
Ny lakozia dia navadika ho lakozia misokatra satria mpihinana maivana i Cat sy ny vadiny. Mahalana izy no mahandro, ka tsy misy olana ny menaka ao an-trano. Ny kabinetra kiraro dia mifamatotra amin'ny kabinetra, ary ny fitehirizana dia mahery vaika. Ny seza mivalona dia apetaka amin'ny rindrina, manamora ny fanovana kiraro. Rehefa manokatra lakozia ianao dia mahatsapa mamiratra sy malalaka rehefa mody. Tsy mila mandrehitra jiro mandritra ny andro, ary tena mamirapiratra rehefa mody.
Milahatra ny latabatra an-dakozia, mahatonga ny fandrahoan-tsakafo ho mora kokoa sy maivana. Feno volondavenona, mora karakaraina, mitsitsy fotoana amin'ny enti-mody. Ny mpanasa lamba fanasan-damba dia napetraka ao an-dakozia, manome toerana malalaka ho an'ny fanamainana eo amin'ny lavarangana. Eo koa ny faritra maina any ivelany, noho izany mora maina sy diovina rehefa avy manasa.
Ny tompon-trano taloha dia tsy nanangona voninkazo. Noho ny fanitarana ny lavarangana lavarangana dia manana lavarangana fanampiny ny fianakaviana, ka nametahana fefy voninkazo telo metatra izy ireo. Fotoana lehibe tokony hambolena voninkazo sy zavamaniry hamelomana ny toe-po sy hanatsarana ny trano.
▲ Alohan'ny sy aorian'ny fanovana
Vohay ny lakozia ary atambaro ny lavarangana velona mankany anatiny. Ny kaontera fandidiana lava be dia malalaka kokoa ary ilaina kokoa, ary mamiratra kokoa ny fidirana.
Apetraho eo anelanelan'ny fidirana sy ny efitrano fisakafoana ny kabinetra ary apetaho ny làlamby. Afaka misintona mora foana izy io. Afaka mitahiry zavatra be dia be izy raha tsy maka toerana malalaka.
3 、 Vohay ny efitra fandroana ary apetaho ny varavarana mihetsiketsika amin'ny lafiny roa. Afaka mivezivezy ao an-dakozia sy ao amin'ny efitrano fidiovana ny mponina. Malalaka kokoa ny tsipika fivezivezena anatiny.
4 、 Sokafy ny efitrano fatoriana faharoa ary mifandraisa amin'ny efitrano fisakafoanana ho an'ny vahiny. Malalaka sy mahazo aina kokoa ny faritra be olona. Napetraka eo anelanelan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano misy fiasa marobe koa ny sezatra azo nakarina. Raha ny mahazatra dia olona roa no afaka mampiasa ilay seza ao an-trano. Afaka mametraka ny sofa ny vahiny ary miara-mipetraka mijery sarimihetsika sy miresaka.
Ny efitrano fatoriana dia misy efitrano fanamarinana, izay kabinetra azo ovaina mekanika ihany koa. Mahery sy mitahiry habaka ny fitehirizana.
Toerana misy ny tetikasa 丨 Shanghai, Sina
Faritra tetikasa 丨 80㎡
Distrikan'ny tetikasa ： Zaridainan'i Huining
Fitaovana ampiasaina ： Hazo, firafitra vy, vato, loko latina ……
Manao famolavolana miaraka amin'ny mari-pana, hahatratra trano misy fihetsem-po
Previous :: Sehatra kanto izay sady taloha no maoderina, mandova ny hakanton'ny atsinanana ｜ fisaintsainana Millo Next: Trano tsara tarehy 90 metatra toradroa Trano tsara tarehy, Toetra voajanahary Retro Mahafinaritra loatra | Famolavolana maharitra